Kooxaha Man United, Tottenham iyo Borussia Dortmund oo isku haysta xiddig ka tirsan Juventus – Gool FM
Haaruun January 26, 2020
(Yurub) 26 Jan 2020. Kooxaha Man United iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Kooxda Juventus, Emre Can.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa ku dhibtooday inuu waqti ku filan u ciyaaro Juve xilli ciyaareedkaan, waxaana lagu soo maramayaa inuu doonayo inuu ka tago kooxda si uu kaga mid noqdo xiddigaha Jarmalka uga qeyb gali doona tartanka Euro 2020.
Borussia Dortmund ayaa dhawaanahaanba si dhaw ula socotay xaladda Can, kaasoo xilli ciyaareed la qaatay kooxda ay ku xafiiltamaan Bundesliga ee Bayern Munich.
Sida laga soo xigtay SPORT1, 26-sano jirkan ayaa haysta fursado kale si uu dib ugu soo laabto horyaalka Permier league, waxaana uu kala dooran karaa Man United iyo Tottenham kuwaasoo muujiyey xiisaha ay u qabaan saxiixa laacibkaan inta lagu guda jiray bishaan Janaayo.
Emre Can ayaa u saftay 37 kulan Kooxda Juventus dhammaan tartammada oo dhan xilli ciyaareedkii hore, laakiin waxa uu ciyaaray kaliya siddeed jeer xilli ciyaareedkii 2019-20.
Dhanka kale, warbixin gaar ah ayaa sheegaysa in Juventus ay u dhaqaaqi karto ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Napoli, Allan si ay ugu bedelaan Can haddii uu baxo.
Yeelkeede, Jookarkii hore ee kooxda Liverpool ayaa maanka lagu hayaa in uusan diyaar u ahayn inuu kursiga keydka ka galo Juventus waqtigan wixii ka dambeeya si uu fursad ugu helo matalidda xulkiisa Jarmalka si gaar ah tartanka Qarammada Yurub ee Euro 2020.
Kooxda Barcelona oo laga soo diiday dalab qaali ah oo ay ka gudbisay Weeraryahan Wissam Ben Yedder